Tatitry ny voina :: Marary an-jatony notaomina ho eny amin'ny Hjra nandritra ny Fetim-pirenena • AoRaha
Tatitry ny voina Marary an-jatony notaomina ho eny amin’ny Hjra nandritra ny Fetim-pirenena
Olona maherin’ny zato no marary tonga tetsy amin’ ny hopitaly Joseph Ravoahangy Andrianavalona (Hjra), afak’omaly, 25 jona. Enimpolo kosa ireo marary nandalo sy nozahana tao amin’io hopitalibe io, omaly 26 jona nankalazana ny Fetim-pirenena, araka ny tatitra voaray hatramin’ny 4 ora hariva.
Misy amin’izy ireo no voa­tery notazonina manaraka fitsaboana. Ny sasany kosa nalefa nody, rehefa avy nozahan’ny mpitsabo. Olona telo no namoy ny ainy, izay voa­laza fa efa maty tany ivelan’ny hopitaly ka tsy voavonjy intsony.
Nahazoana tatitra tamin’ ny akon’ny fankalazana ny Fetim-pirenena, ny 25 sy 26 jona ny tao amin’ny sampana vonjy aina sy ny tao amin’ny sampana famelomana aina. Ny tamin’ny talata 25 jona manokana, dia olona fito ambin’ny folo no voarain’ny mpitsabo tao amin’ny sampana famelomana aina. Olona telo narary vokatry ny hamamoana, roa nikasa namono tena ary ny telo hafa tsy nahazaka sakafo. Nisy olona roa efa maty tsy avotra intsony tonga tao amin’io sampana io.
Ratra sy adiady
«Maro ireo marary tonga tao amin’ny sampana vonjy aina, ny talata 25 jona, izay nahatratra telo amby zato. Tsy nitsahatra nisy marary tonga tao hatramin’ny sasak’ alina. Marary sy naratra vokatry ny adiady sy fikasihan-tanana ny ankamaroan’izy ireo », hoy ny profesora Rakoto Alson Olivat, talen’ny Hjra.
Tsy nisy azo natao kosa nanavotana ny ain’ny olona iray tonga tao amin’ny sampana vonjy aina, omaly. Marary efatra amby dimampolo hafa no nandalo tao amin’io sampana io ka voatery notazonina ny roa ambin’ny folo. Niharan’ny lozam-pifamoivoizana ny enina ambin’ny folo tamin’izy ireo. Ny tao amin’ny sampana famelomana aina kosa indray dia nahitana olona roa nararin’ ny toaka, niampy iray namono tena. Marary enina no voaray tao, hatramin’ny omaly harivariva.
Herisetra amin’ny mahaolona :: Misy ireo vehivavy sembana terena tsy hitondra vohoka